MB ၂၀၁၆ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာအနှံ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
ကြှနျုပျတို့အကွောငျး > ဂျေ Tkach ကနေန်ထမ်းပေးစာ > ကို MB 2015 အောက်တိုဘာလ
Obwohl diese absurde Formel momentanes Glück hervorbrachte, brachte es keine anhaltende Freude hervor. Bitte, verstehen Sie das nicht falsch; gutes Lachen geniesse ich ebenso wie jeder andere. Deshalb weiss ich die Aussage von Karl Barth zu schätzen: «Lachen; ist das Naheliegenste gegenüber Gottes Gnade. »Obwohl uns beides, Glück und Freude, zum Lachen bringen kann, gibt es zwischen beiden einen bedeutsamen Unterschied. Einen Unterschied, den ich vor vielen Jahren erlebte, als mein Vater starb (hier rechts sind wir zusammen abgebildet). Natürlich war ich über das Ableben meines Vaters nicht glücklich, aber ich war durch die Freude beruhigt und ermutigt, zu wissen, dass er eine neue Gottesnähe in Ewigkeit erlebe. Der Gedanke dieser herrlichen Realität hielt an und gab mir Freude. Abhängig von der Übersetzung, benutzt die Bibel die Worte glücklich und Glück etwa 30-mal, während Freude und freuen mehr als 300-mal erscheinen. Im Alten Testament wird das hebräische Wort Sama (übersetzt freuen, Freude und erfreut) verwendet, um eine breite Palette von menschlichen Erfahrungen abzudecken, wie Sex, Heirat, die Geburt von Kindern, Ernte, Sieg und Wein trinken (Hohelied 1,4 ; ဆိုရိုးစကား ၂5,18; ဆာလံ ၁၀3,9; ဟေရှာယ 9,3 und Psalm 104,15). Im Neuen Testament wird das griechische Wort «chara» in erster Linie dazu verwendet, um Freude in den erlösenden Taten Gottes zum Ausdruck zu bringen, der Ankunft seines Sohnes (Lukas 2,10) und der Auferstehung von Jesus (Lukas 24,41). So wie wir es im Neuen Testament lesen, verstehen wir, dass das Wort Freude mehr als ein Gefühl ist; es ist ein charakteristisches Merkmal eines Christen. Freude ist Teil, der durch das innere Wirken des Heiligen Geistes hervorgebrachten Frucht.
«ချစ်လှစွာသောညီအစ်ကိုများ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်တရားခွင်မကျရောက်မီထိန်းသိမ်းထားခြင်းသည် the ၀ ံဂေလိတရားပြန့်ပွားခြင်းကိုတားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းသင်သိသင့်သည်။ ထိုဆန့်ကျင်ပေါ်! ယခုတွင်ကျွန်ုပ်၏အစောင့်များအားလုံးနှင့်အခြားဖြစ်စဉ်များတွင်ပါ ၀ င်သူများအားကျွန်ုပ်သည်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောကြောင့်သာအချုပ်ခံရကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သုံ့ပန်းဘဝမှခရစ်ယာန်များစွာသည်ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်ယုံကြည်မှုအသစ်ရရှိခဲ့သည်။ ယခုသူတို့သည်ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်ကိုရဲရင့်စွာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲဟောပြောနေကြသည်။ ”
“ မင်းရဲ့အာရုံကိုအာရုံစိုက်ဖို့ဒီဟာကိုငါမပြောဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ဘဝရဲ့အခြေအနေအားလုံးကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတတ်လာတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်နည်းနည်းဖြစ်စေ၊ အများကြီးရှိသည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်နှစ် ဦး စလုံးနှင့်အလွန်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်နှစ် ဦး စလုံးနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ငါချို့တဲ့ခြင်းနှင့်ပေါများခြင်းမှခံစားနိုင်ပါတယ်။ ငါ့ကိုခွန်အားနှင့်ခွန်အားပေးတော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုငါပြုနိုင်သည်။ »
ပျော်ရွှင်မှုသည်ယာယီသာဖြစ်သည်၊ မကြာခဏခဏသာဖြစ်ဖြစ်၊ သို့မဟုတ်ရေတိုကျေနပ်မှု၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ရွှင်လန်းခြင်းသည်ထာဝရနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကားမည်သူဖြစ်သည်၊ သူဘာလုပ်ခဲ့သည်၊ ဘာလုပ်သည်၊ ဘာလုပ်မည်ကိုသိရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။
အကြောင်းမှာပျော်ရွှင်မှုသည်အကြောင်းများစွာပေါ်မူတည်သည်။ ၎င်းသည်မတည်ငြိမ်၊ နက်ရှိုင်းသို့မဟုတ်ရင့်ကျက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်လည်းကောင်း၊ အခြားသူများနှင့်လည်းကောင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှရွှင်လန်းမှုတိုးပွားလာသည်။
ပျော်ရွှင်မှုသည်ယာယီအပြင်ဘက်ဖြစ်ရပ်များ၊ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်လုပ်ရပ်များမှလာသည်။ ရွှင်လန်းခြင်းသည်သင့်၌တည်ရှိပြီးသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင်မှုမှလာသည်။